Raisul Wasaare xilka haya oo loo Maxkamadeynayo ku lug lahaashaha dilka xaaskiisa – Kismaayo24 News Agency
by admin 21st February 2020 0141
Booliska dalka Lesotho ayaa sheegay in ra’iisul wasaaraha dalkaas, Thomas Thabane, oo da’diisu ay tahay 80 sano jir maanta oo Jimce ah loo maxkamadeyn doona dilka xaaskiisi hore, Lipolelo Thabane.
Thabane ayaa ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo bisha July ee sanadkan, isagoo sheegay inuu hawlgab noqonayo.
Lipolelo, oo 58 jir ahayd ayaa toogasho lagu dilay laba maalin kahor doorashadii 2017, ka hor inta uusan Thabane noqon ra’iisul wasaare.
Xilliga la dilayey waxaa uu khilaaf xoogan kala dhaxeeyay ra’iisul wasaare Thabane, waxaana xilligaas uu ra’iisul wasaaraha la joogay xaaska uu hataan qabo ee Maesaiah.
Markii la dilay xaaskiisa, waxaa uu falkii dhacay ku tilmaamay axmaqnimo, balse booliska waxay haatan ku eedeeyeen inuu ku lug lahaa dilka xaaskiisa, iyagoo sheegay iney hayaan cadeymo lagu maxkamadeyn karo.
DAAWO: Madaxweyne Farmaajo oo soo xiray Kalfadhigii 6-aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliy.
Ciidamada AMISOM Oo Qarax Khasaaro Geystay Lagula Eegtay Gobolka.
Daawo: Soomaaliya oo Markii ugu horeysay ka qeyb-gashay Shirka Wadamada Batroolka Caalamka.
admin 10th July 2017
Daawo: Dabaal dagii ugu weynaay oo maanta muqdisho ka dhacay boqolaal kun oo askar, shacab iyo saraakiil isugu jirta oo ka qeyb galay
Dhagayso:- Madaxweyne Axmed Madoobe ” Dowladda Faderaalka in aniga iyo Shariif Xasan na kulansiiso waa ku Mahadsantahy “
Tifaftiraha K24 10th January 2016 10th January 2016